Itaosy : Kioska iray notafihan-jiolahy nitam-piadiana -
AccueilSongandinaItaosy : Kioska iray notafihan-jiolahy nitam-piadiana
Itaosy : Kioska iray notafihan-jiolahy nitam-piadiana
05/11/2018 admintriatra Songandina 0
Lasa fiainana andavanandron’ny olona ankehitriny ny fanafihana mitam-piadiana. Jiolahy miisa telo nitondra basy poleta sy sabatra indray no voalaza fa nanatanteraka fanafihana tao amin’ny toerana fandefasana sy fakana vola amin’ny « Orange money » tao amin’ny fokontany Ambonisoa Itaosy, ny marainan ‘ny Sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany.
Niditra toa ireny olona handeha haka vola ireny ny roalahy nitam-basy raha ny fitantaran’ny olona nanatri-maso. Nony tafiditra ny trano kosa anefa izy dia nanambana basy avy hatrany ireo olona tao anatin’ity toeram-pandefasana vola ity, raha ny namany iray kosa niandry sy nijery ny manodidina. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny lelavola manodidina ny 1 Tapitrisa Ariary, tao amin’ny fitoeram-bola. Efa be olona ihany teny an-toerana saingy nitampify noho ny fampihorohoroana no sady tsy nisy nahasahy niantso vonjy nandritry ny fisehoan-javatra, hoy ihany ny fanazavana azo.
Tokony ho dimy minitra teo ho eo ihany no faharetan’ny fandrobana nataon’ireo olon-dratsy dia azony ny vola ary lasa nandeha an-tongotra nihazo ny lalàna nankany Ambaniala toa ireny olon-tsotra ireny izy ireo. Ora vitsy taorian’izay kosa vao nahazo fampandrenesana ny polisy, ka tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana. Ny nahagaga kosa dia toerana matetika ahitana polisy manoloana io toeram-pandefasam-bola voatafika io nefa tamin’io fotoana nisian’ny fanafihana io kosa anefa dia tsy nisy mpitandro filaminana ka nanararaotra nanao ny asa ratsiny ireto jiolahy. Manoloana izany, efa mandeha ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana mahakasika ny raharaha.